Apple TV + inofungidzirwa kuti yakatopfuura mamirioni makumi mana vanyoreri | Ndinobva mac
Toni Cortes | 12/05/2021 22:00 | Rumo
Kufungidzira kwenhamba yevanonyorera iyo Apple TV + inogona kunge yaburitswa, uye vanoiisa pamufananidzo unodarika iyo 40 mamiriyoni mukupera kwegore rapfuura. Kwandiri vakatendeseka vanoita kunge vashoma, vashoma kwazvo.
Vashoma kune iyo kambani ine bhiriyoni inoshanda iPhones papasi. Vane bhiriyoni vashandisi veApple, avo makumi mana chete vanoona Apple TV +. Uye ndine chokwadi chekuti kune avo vanonyorera papuratifomu, ruzhinji ruchine gore rekusununguka kusimudzira rinoshanda kana iwe watenga chishandiso chitsva mumakore maviri apfuura.
Zvinoenderana neshumo rakaburitswa na Newsweek, Ampare Kuongorora, kambani inonyanya kuongorora musika, inofungidzira kuti vanyoreri kuApple yekushambadzira vhidhiyo sevhisi vanogona kunge vakapfuura mamirioni makumi mana pakupera kwa40. Izvi zvinomiririra kukura kwevanopfuura mamirioni matanhatu evashandisi kana zvichienzaniswa nenhamba dze2020.
Chirevo chinotaura zvakare kuti, maererano neongororo ichangobva kuitwa ye Kusiyana-siyana, vanosvika vatatu-vashanu vevanyori veApple TV + vanoramba vachigamuchira sevhisi yemahara, nekuda kwekusimudzira kweApple kwegore mahara kuchikuva chayo kana ukatenga chigadzirwa chitsva.
Apple TV + haina kuburitsa pachena zvazvino uno wekunyora, asi sekureva kweAmpere Analysis, chikuva chaive nacho 33,6 mamiriyoni vashandisi pakupera kwa2019, uye zvinofungidzirwa kuti ingadai yasvika mamirioni makumi mana pakupera kwa40.
Vazhinji vevanyori vako vanoramba vasina kubhadharwa
Uku kuwedzera kwehuwandu hwevanyori kunotsanangurwa nenyaya yekuti Apple ipa gore Apple TV + nekutenga zvishandiso zvitsva. Inofungidzirwa kuti anopfuura matatu muzvishanu ekunyoreswa asiri kubhadhara sevhisi.
Zvakaoma kuziva chaizvo kana fungidziro idzi dzakarurama chaizvo kana kuti kwete. Apple haimbotsanangure iyo chaiyo nhamba yevanyoreri kune chero yavo yega masevhisi seApple TV +, Apple Music, kana Apple Arcade. Zvisinei, ichangobva kuburitsa kuti kambani yakanga yapfuura iyo 660 mamiriyoni yemabhadharo akabhadharwa achiwedzera ese masevhisi.
Muchidimbu, kana nhamba dziri dzechokwadi uye Apple TV + ine vanopfuura mamirioni makumi mana chete vanyoreri (vachibhadhara kana kwete), ichiri kure kumashure kwemaviri makuru, Disney + y Netflix, idzo dzakapfuura mamirioni zana uye mazana maviri evanyoreri, zvichiteerana, uye izvi zvinobhadharwa, kunyange hazvo dzimwe nhoroondo dzeNetflix dzakagovaniswa. Parizvino
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Rumo » Apple TV + inofungidzirwa kuti yakatopfuura mamirioni makumi mana ekunyoresa